चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ अल नेपाल प्रदर्शनमा ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ अल नेपाल प्रदर्शनमा !
प्रकाशित: २८ पुष २०७४, शुक्रबार
पौष २८, काठमाडौं । द फ्रेम क्रियशन प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ आजबाट अल नेपाल रिलिज भएको छ ।
प्रियंका कार्की, अर्पण थापा र आर्यन अधिकारीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र बटरफ्लाईमा ओम प्रतीक गुरुङको लेखन तथा निर्देशन रहेको भएको छ ।
रमेश प्रजापति कार्यकारी निर्माता रहने यस चलचित्रमा पुष्पाञ्जली अधिकारी (सखा) निर्माता र रामशरण राणा, भुपेन्द्र सुवेदी, सरोज शाह सहनिर्माता रहेका छन् । कन्ट्रि निर्माताका रुपमा ध्रुवराज रहेका छन् भने सुरेश बज्राचार्यको छायाँकन रहने भएको छ । कविराज गहतराजले चलचित्र बटरफ्लाईको कोरियोग्राफ गरेका छन् । चलचित्रमा कुमार महर्जनको द्वन्द्व रहेको छ ।
विकास चौधरी, दिपक शर्माको संगीत रहेको चलचित्र बटरफ्लाईको गीत शान्तिप्रिय, ओम प्रतिक गुरुङ, प्रमोद ढुंगाना, सरोज लामिछानेको गीत रहेको छ । चलचित्रमा युवराज चौलागाईं, राजेशपायल राई, माण्डवी त्रिपाठी, विश्व नेपाली र कोशिष क्षेत्रको स्वर रहेको छ ।
‘बटरफ्लाई’ प्रदर्शनको दिन नै राजधानीको कुमारी हलमा प्रिमियर शो गरिएको थियो ।
‘बटरफ्लाई’ हेर्नका लागि १६ बर्ष मुनिका बालबालिकाले अभिभावक लिएर जानु पर्ने भएको छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले दिएको नयाँ सर्टिफिकेट ‘पिजी’ अनुसार उक्त नियम लागु भएको हो । चलचित्रले सेन्सर बोर्डले चलचित्रलाई ‘पिजी’ (प्यारेन्टल गाइडलाइन्स सर्टिफिकेट) दिएको हो ।
यो चलचित्रसँग रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बनेको मिस्टर झोले भिड्दैछ ।
अस्पताललाई अभिनेत्री मनिषाले गरिन् भेन्टिलेटर सहयोग
प्रियंकाको प्रेग्नेन्सी अनुभव र बयानः ‘डिसेम्बरलाई टार्गेट गरेको, पहिलो ट्राइमै सफल भयौ’
नाजिरले दिए कोरोनाका लागि अक्सिजन जुटाउन एक लाख रुपैयाँ
को हुन् हेमन्त शर्माको असफल मायालु ?
निशालाई कलाकार र संघ–संस्थाको सहयोग अभियान, सामाजिक सञ्जालमा छाइन् मेघा
चेतन, मनोहर र बानिकाको हिजो आज
लण्डनको चर्चित रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’मा नेपाली मोडल अनिता लिम्बु